Umatshini woku-ayina oMatshini oSebenzayo usetelwe ukwenza ukuhlanjwa kube lula kakhulu - Ukucoca
Ukuhamba: Ukuhlala Kunye Neendawo Zokuphupha
Umatshini woku-ayina oMatshini oSebenzayo usetelwe ukwenza ukuhlanjwa kube lula kakhulu
Awusoze uphinde u-ayine kwakhona ngenxa yolwakhiwo olutsha oluthembisa ukufezekisa oko kuchazwe njengako Owona msebenzi ucekisekayo e-UK .
Ukhuthazwe ngumnqweno wokwenza ubomi bube lula usebenzisa itekhnoloji, U-Effie Umatshini omtsha woku-ayina ozenzele iimpahla zakho-enyanisweni, unoku-ayina izinto ezili-12 zokunxiba nangaliphi na ixesha.
Kuthiwa 'kulula ukuyisebenzisa ngokulula', konke okufuneka ukwenze kukuthatha iimpahla zakho ezimanzi nezishwabeneyo kumatshini wokuhlamba kwaye uzixhome kuloliwe okhutshwa nguEffie. Ke ngoku ngokucofa iqhosha, u-Effie uya kuqhubeka nokomisa iimpahla zakho kwaye asebenzise 'ubuchule bokunyanga ubushushu obunelungelo lobunikazi' ukuzisusa zonke izinto, uzishiya zicinezelwe ngokugqibeleleyo, kwimizuzu nje emithathu.
Ihempe, ibhulukhwe, iziketi kunye nezinto zokulala zinokufakwa kumatshini we-Effie, kwaye unokuzicwangcisa kwifowuni yakho ukuze waziswe xa iimpahla zakho zenziwe nge-ayina. Kuvakala kulungile, akunjalo?
imifanekiso yeekhabhathi zasekhitshini
Lo matshini mncinci kancinci, kodwa uyathuthwa, ngenxa yoko unokuba namavili ngokulula uye ekoneni okanye ugcinwe kwenye indawo xa ungasetyenziswa.
U-Effie U-Effie U-Effie
Umatshini wenziwa ziinjineli uRohan Kamdar kunye noTrevor Kerth, ochithe iminyaka emibini kwaye wenza iiprototypes ezingama-40 ngaphambi kokuzalwa kukaEffie wangoku.
Kuba sikwazile ukuvavanya ngokukhawuleza iinguqulelo ezininzi kunye neempawu ezahlukileyo ze-Effie, siqinisekile ukuba ifomu yokugqibela sisixhobo oya kukuvuyela ukusisebenzisa, kwaye siyakukugcinela ixesha elininzi kunye noxinzelelo lwengqondo. Siyakucaphukela uku-ayina!, Utshilo uRohan.
Okwangoku kwisigaba seprototype, abantu banokubhalisa inzala yabo kwi www.helloeffie.com ukunceda ukuzisa u-Effie kwintengiso.
Kwenye indawo, ikhaya-umncedisi iFoldimate yatyhilwa ngexesha le-CES 2017 ekuqaleni kwalo nyaka , ebaluleke kakhuluSonga yonke ingobozi yokuhlamba kwimizuzu emithathu. Imiselwe ukuba ibe kwintengiso ngo-2018, itsala izinto zokunxiba kuthotho lweziqengqeleki ezijija ukunciphisa imibimbi ngaphambi kokugoba ngokugqibeleleyo.
Jonga indlela i-Effie eza kusebenza ngayo kwividiyo engezantsi:
ukulungisa izimvo kumagumbi okuhlambela amancinci
UOlivia Heath Umhleli oLawulayo weDijithali, iNdlu entle yase-UK U-Olivia Heath nguMhleli weDijithali oLawulayo kwiNdlu entle yase-UK apho uxakeke khona ekufumaniseni ezona ntsingiselo zekhaya zinkulu ngomso, zonke ngelixa ehambisa inkuthazo yegumbi elinesitayile, izisombululo zendawo encinci, izimvo ezilula zegadi kunye nokhenketho lwendlu kwezona ndawo zishushu kwimarike.Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukubonelela ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io Intengiso-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi
itafile encinci yasekhitshini
iseti yokutyela yasekhitshini
Iintyatyambo ezimfusa zomthi california